Ngwaahịa - Baron (China) Co., Ltd.
Diafọdụ diaper na-eju anya, mana ị gaghị enwe ike iji otu diaper ahụ wulite ihe niile ị na - eme n'ihi ọnụ ahịa ya. Mee ka nrụgide nke mmefu ego gị belata site na ịdị iche iche kachasị mma na stash gị.
INN C Nlekọta
Dị ka ngwaahịa nlekọta ụmụ nwanyị bụ usoro ịzụ ihe kwa ọnwa, ọ pụtara na ị na-eche mgbe niile gbasara ego na nlekọta. Mana ị makwaara na ịchọrọ ịdị mma n'oge okirikiri gị. Nke a bụ ihe mere anyị ji enwekarị onyinye dị mma maka ụdị ngwaahịa nlekọta nwanyị.
N’ikwu okwu banyere ngwaahịa ndị okenye na-elekọta, enwere ọtụtụ ihe anaghị ekwe ekwe ịhọrọ ma ịhọrọ nke ziri ezi nwere ike ịbụ aghụghọ. Enwere ọtụtụ ihe ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ ngwaahịa na-adọrọ adọrọ, gụnyere mgbanwe nke kwekọrọ na ọkwa ọrụ onye ị hụrụ n'anya. Dịka ụlọ ọrụ nwere ahụmahụ na-elekwasị anya na ngwaahịa ịdị ọcha nke onwe, anyị ji n'aka na anyị nwere ike inye gị naanị ihe ị chọrọ.
Na-ebi ndụ obibi obibi: Besuper® bụ ebe a iji nwaa ma belata oke mkpofu adịghị mma anyị na-emepụta. Site na ime obere mgbanwe na ndụ gị kwa ụbọchị ị ga - enyere aka mee nnukwu ihe ga - eme n’ezinaụlọ gị na ụwa anyị. Achara mpempe akwụkwọ, akpa na-ere ere, nri nri abalị. Anyị nwere ọtụtụ ihe na-emebi emebi, na-ebugharị ihe mkpofu ndị ọzọ na mkpofu ahịhịa.
Mgbasa Ozi USwa nile
High Quality Eco metụ akwa, Super Absorbency Adult metụ akwa, Metụ nwa, Mezie metụ akwa, Mechie nwa ọhụrụ, Baby Wipes N'ihi Mmetụta Skin,